ဆက်ဆံရေး၏ရန်သူ5| Bezzia
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | 13/01/2022 22:46 | Relaciones
ဇနီးမောင်နှံဆက်ဆံရေးသည် လူအချင်းချင်းကြားတွင် ကျန်သောဆက်ဆံရေးနှင့် ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့၊ အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးလာနိုင်သည်။ အရာအားလုံး ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နေပြီး နှောင်ကြိုးသည် တနေ့ထက်တနေ့ ပိုမို ခိုင်မာလာကာ သို့မဟုတ် အထက်ဖော်ပြပါ ဆက်ဆံရေးကို တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းသွားစေသည့် ရန်သူအချို့ ပါဝင်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးတွင် ဆက်ဆံရေးတစ်ခုသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်သည့် ပုံမှန်အကြောင်းရင်းများ သို့မဟုတ် အကြောင်းရင်းများကို ဆွေးနွေးသည်။ အဆုံးသတ်နိုင်ပါစေ။
လင်မယားနှစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်လို့ မရဘူး။ အခြေခံမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သောကြောင့် အခြေခံမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သည်။ စုံတွဲများ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများသည် ၎င်းတို့ခံစားရသမျှကို အချိန်တိုင်းဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့မဖြစ်ပွားပါက၊ တိုက်ပွဲများနှင့် ပဋိပက္ခများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စတင်ရန်မှာ ပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ အေးအေးဆေးဆေး အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ပြီး သင်ခံစားရတာကို ပြောတာက ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့ သာယာမှုအတွက် ကောင်းပါတယ်။
ဇနီးမောင်နှံအတွက် နောက်ထပ်ရန်သူမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှီခိုမှုဖြစ်သည်။ မိမိပျော်ရွှင်မှုသည် အခြားသူတစ်ဦးအပေါ်တွင် အချိန်တိုင်း မူတည်နေ၍ မရပေ။ စိတ်ခံစားမှုအားကိုးခြင်းသည် လင်မယားနှစ်ယောက်နှင့် ဆက်ဆံရေးကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်။ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးဟာ လွတ်လပ်ပြီး အနှောင်အဖွဲ့ကင်းရမယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြယ်လှယ်မှုသည် စုံတွဲတစ်တွဲ၏ ကြီးမားသော ရန်သူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် လက်တွဲဖော်ကို ၎င်းတို့နှင့် နီးကပ်စွာထားနိုင်ရန် အလို့ငှာ အပြစ်တင်မှုများဆက်တိုက်လက်ခံသည်။ ဤခြယ်လှယ်မှုသည် အထက်တွင်တွေ့ရသော စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ မှီခိုမှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ လင်မယားနှစ်ဦး၏ ပါတီများမှ တစ်ဦးက အခြားသူတစ်ဦးအား ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြယ်လှယ်မှုကို အသုံးပြုသည့် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို သည်းမခံနိုင်ပါ။
ယုံကြည်မှုသည် ကောင်းမွန်သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် အတူ ဇနီးမောင်နှံအတွက် အဓိက မဏ္ဍိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်လူအပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းက ဆက်ဆံရေးကို တဖြည်းဖြည်း အားနည်းသွားစေတယ်။ ကိစ္စအများစုတွင် ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့မှု ပေါ်လာသည်။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး၏ မုသားစကားများ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်စုံတွဲတွင်မဆို အထက်ဖော်ပြပါ ဆက်ဆံရေးကို အန္တရာယ်မပြုနိုင်သော သဘာဝအရ မနာလိုမှုအချို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့အတွက် ကြီးမားသော ပြဿနာမှာ ၎င်းတို့သည် အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေခြင်းနှင့် ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာ မနာလိုခြင်း တို့ဖြစ်သည်။. ဤမနာလိုမှုအမျိုးအစားသည် မည်သည့်ဆက်ဆံရေးအတွက်မဆို ကြီးမားသောရန်သူဖြစ်ပြီး ပဋိပက္ခများနှင့် ရန်ပွဲများ၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တိုတောင်းခုနှစ်, ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးက လွယ်တယ်လို့ ဘယ်သူမှ မပြောပါဘူး။ ၎င်းသည် လူနှစ်ဦးကြားရှိ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အချို့သောသုခချမ်းသာနှင့် ပျော်ရွှင်မှုရရှိရန် မျက်နှာသာပေးကာ အဆက်မပြတ် တန်းစီနေရမည်ဖြစ်သည်။ လေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ ဆက်သွယ်မှု သို့မဟုတ် ချစ်ခြင်းစသည့် ဆက်ဆံရေး အားနည်းသွားစေရန် တည်ရှိနေရမည့် အစိတ်အပိုင်းများစွာ ရှိပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး၏ အနာဂတ်ကို လုံးဝအကျိုးမပြုနိုင်သော ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့် အချို့သောရန်သူများ မပေါ်ပေါက်စေရန် တားဆီးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » စိတ်ပညာနှင့်စုံတွဲ » Relaciones » ဆက်ဆံရေး၏ရန်သူ ၅